Antigua neBarbuda Citizenship yeNonsuch Bay Mugove
Mugove wemuhotera uri kutengeswa kuAntigua neBarbuda Citizenship
Imwe yenzvimbo dzakanakisa uye dzemazuva ano dzekutandarira dzeCaribbean dziri pamhenderekedzo yegungwa isina kuvharwa yeNonsuch Bay, Antigua. Iyo nzvimbo yekutandarira inokodzera vaviri vakaroorana uye mhuri uye ndiyo inzvimbo yakanaka kana iwe uchida kuzorora uye kuzorora kana kunakidzwa nezororo rinonakidza.
Nonsuch Bay Resort inokupa iwe sarudzo yekubhuka imwe yedu yakasarudzika yekuzvipa-yega yekudyira masuti emhuri kana kutamira mune imwe yemafurati emhuri kuThe Escape. Nonsuch Bay Resort inoumbwa nemakumi mana akapamhama, masutu akasarudzika uye dzimba dzekumahombekombe dzine hombe, dzine mabharoni ane mimvuri inopa kutaridzika kwakanaka kwenzvimbo dzinopisa dzemhenderekedzo yegungwa uye negungwa rine turquoise. Iyo nzvimbo yekutandarira ine yakazvimiririra pamhenderekedzo yegungwa pamwe nemahombekombe mashanu akasiyiwa ari paGreen Island iri padyo, iri pfupi rwendo rwechikepe kubva kumahombekombe
Vaenzi vanogona kuenda kayaking uye snorkelling. Bhuku Nonsuch Bay Antigua nhasi uye tungamira kune imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekugara kuCaribbean kune vakaroorana uye mhuri.
Dzokera ku Citizenship neReal Estate